Xukun Jacaylka Axmed Madoobe iyo ku xumeeyska Barre Hiiraale maxaa kala heeysta ? !!	|
Xukun Jacaylka Axmed Madoobe iyo ku xumeeyska Barre Hiiraale maxaa kala heeysta ? !!
Hogaamiyaha Kooxda Raaskanbooni Axmed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa waxaa soo food saartay Siyaasad xumo iyo jahwareer uusan fileenin ka dib markii Siyaasadii ama Kubadii uu mudada dheer ciyaarayay uu ka dhiiqeeyay Col. Barre Aadan Shire Hiiraale.
Sheekada iyo Siyaasada ka taagan magaalada Kismaayo ayaa waxa ay isku badashay (Midi midi ku taag) taas oo la wada ogsoon yahay halka ay caga dhigan doonto (Dagaal iyo bur bur ka dhaca Jubooyinka). Axmed Madoobe siyaasad ahaan waxaa hor boodeeysa dawlada Kenya balse magaalada Kismaayo luuq ka luuq waxaa ku xoogan Taageerayaasha Col. Barre Aadan Shire Hiiraale.
Ciidamada Kenya iyo Kooxda Raaskanbooni oo magaalada Kismaayo aanan weli qabsan ayaa inta badan dadka ka faalooda Siyaasada Soomaaliya waxa ay sheegeen Axmed Madoobe inuu yahay wadaad siyaasada Somaliya ku cusub oo marnaba aanan yeeli doonin in nin kale uu ka soo baxo ama loo doorta jagada ugu sareeysa ee gobolka Jubooyinka .
Col. Barre Aadan Shire Hiiraale oo inta badan ku qaraabto magaca Dawlada waliba gobolkaas ay kaga dhinteen ciidamo fara badan intii uu la dagaalamayay Maleeshiyaadka Al Shabaab ayaa iminka shaqsi ahaan wuxuu Sheekh Axmed Madoobe u arkaa wadaad xukun doon ah oo hadana si qaldan wax ku raadinaya.
Hogaamiyaha ururka Raaskanbooni Axmed Islaam (Axmed Madoobe) oo god-kiisa ay biyo ugu soo galeen waxa uu Siyaasad ahaan aad ugu fududaaday sheegashadii Madaxweynaha cusub ee Jubaland State maxaa yeelay tani waxeey guul iyo foowdo cusub u noqotay Col. Barre Aadan Shire Hiiraale oo yaqaan sida wax loo foowdeeyo lugtana loogu walaaqo meel uusan ku jirin madaama uu yahay hogaamiye kooxeed hore.
Bal fiiri xaqiiqada Col. Barre Aadan Shire Hiiraale oo degmooyin kale ku maqnaa dagaalna kula jiray Maleeshiyaadka Al Shabaab kuwooda ku harsan deegaanada uu ka soo jeedo ayaa waxaa mar quraa u yeertay kuna amray inuu Kismaayo yimaado odayaal ka soo kala jeeda Beeshiisa iyo kuwo kale oo ka soo carooday Siyaasad xumida Axmed Madoobe oo qofkii amarkiisa diida shirka ka saarayay.
Hogaamiyaha ururka Raaskanbooni Sheekh Axmed Islaam (Axmed Madoobe) iyo dawlada Kenya siyaasad ahaan hadaad fiiriso mida kaliyah ay kaga guuleeysan kareen garabka Barre Hiiraale waxa ay eheed in aanan la dooran Axmed Madoobe oo taas badalkeeda la doorto Siyaasi kale oo ay labadaas dhinac wataan balse hoos laga maamulo.
Xaalka Juubooyinka ayaa iminka faraha ka sii baxaya waxeeyna inta badan Taageerayaasha Col. Barre Aadan Shire Hiiraale oo magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda aad ugu xoogan aaminsan yihiin inuu Aadan Madoobe wado sad bursi waqtigiisii mar hore laga soo gudbay uuna bidayo awood uusan leheen taas oo ah dawlada Kenya iyo ciidamadeeda.
Dagaal hadii uu ka dhaco magaalada Kismaayo waxaa mid iyo qori isku soo xaadirinaayo Taageerayaasha Col. Barre Aadan Shire Hiiraale iyo 3 Qabiil oo kale oo la midoowday garabka Barre Hiiraale. Dawlada kenya oo faraha kala bixi weeysay arimaha Jubooyinka waliba u deeyn weeysay dhiigeeda dawlada Somalia ayaa iminka waxa ay Kenya quus ka taagan tahay xaalka Kismaayo halka uu ku dambeeyn doono.
Isku soo duubo ciyaarta ka socota magaalada Kismaayo ayaa moodaa mid bilow ah oo waji cusub gashay balse niyad jab xoogan uu ka qaaday Hogaamiyaha ururka Raaskanbooni Sheekh Axmed Islaam (Axmed Madoobe) oo laga ag dhisay 2 Madaxweeyne oo isaga aanan ka amar qaadan .
Dadka qaarkiis ayaa isha ku haya Maleeshiyaadkii Al Shabaab ee magaaladaas iyo inta badan Jubooyinka laga saaray oo Duur duurka ku jira kuwaas oo Kaneeco ay ku cuneeyso keeymaha ama hoowdka waxeeyna sugayaan Jaanis yar oo ay isku fara saaraan Taageerayaasha Col. Barre Aadan Shire Hiiraale iyo kuwa Hogaamiyaha ururka Raaskanbooni Sheekh Axmed Islaam (Axmed Madoobe).